တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ်များနှင့် ပြည်သူ လူထုများသို့ အသိပေးချက် | AAR - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
← NLD ကဒ်အတု ပြုလုပ်ရောင်းချသူ တချို့အား ဖမ်းမိ	လူကုန်ကူးမူ တိုင်ကြားသော်လည်း အရေးယူ မခံရ →	တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ်များနှင့် ပြည်သူ လူထုများသို့ အသိပေးချက်	May 22
မေလ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်
မိမိတို့ ရခိုင်ဒုက္ခသည်များ မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AAR) ၏ ပုံမှန် သုံးစွဲနေသော ရုံးအီးမေးလ် အကောင့် arakan.aar@gmail.com သည် ယမန်နေ့ မေလ ၂၁ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှ စ၍ မသာမသူ တချို့၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ arakan.aar@gmail.com ၏ ယမန်နေ့ ညနေပိုင်းမှစ၍ နောက်နောင် ဆက်သွယ် ဆောင် ရွက်ချက်များသည် မိမိတို့ ရခိုင်ဒုက္ခသည်များ မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AAR) ၏ လုပ်ဆောင်များ မဟုတ်ကြောင်း တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ်များနှင့် ပြည်သူများသို့ အသိပေး လိုက်ပါ သည်။
ထို့ကြောင့် မိမိတို့နှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်နေကြသော အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး အနေဖြင့် ရခိုင် ဒုက္ခသည်များ မဟာမိတ်အဖွဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ၏ အတည်ပြုပြီး ရုံးသုံး အီးမေးလ် အကောင့် ဖြစ်သော aarmalaysia@gmail.com နှင့်သာ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း ပြုပါရန် တိုက်တွန်း အပ်ပါသည်။
Posted on May 22, 2011, in သတင်းကဏ္ဍ, သိရှိစေရန်. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.	← NLD ကဒ်အတု ပြုလုပ်ရောင်းချသူ တချို့အား ဖမ်းမိ	လူကုန်ကူးမူ တိုင်ကြားသော်လည်း အရေးယူ မခံရ →	Leaveacomment